PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - Ngabe ISABC ngekabani kahle hle?
Ngabe ISABC ngekabani kahle hle?
MHLELI, ngithi ake ngiphawule KWILANGA lesizwe. Kunendida ekhona ngenhlangano yezokusakaza ngomoya engaphansi kukahulumeni, isouth African Broadcasting Corporation (SABC).
Le nhlangano silindele ukuba isebenze ngobuqotho nangentobeko lapho isebenzela isizwe futhi isebenzisane ngokubambisana nesizwe nezizwe.
Ake ngikhe nje phezulu - ngoLwesithathu mhla zingama-25 kuMfumfu (October) kuwo lo nyaka bengilaphayana ESABC, ethekwini, emahhovisi esifunda. Ngibone isimanga. Ungezwa sisakazelwa emoyeni nakomabonakude engathi siyahlonishwa, siyathandwa siwumphakathi.
Izikhulu zasesabc kumele ziyisukumele ziyilungise into eyenzeka kule nhlangano. Awukwazi ukubonana nabaphathi nokwedluliselwa izikhalazo zakho kubona okhozini nabakumabonakude. Sifunzwa onogada kuthiwe asixhumane nabo bazobona ukuthi basenzenjani. Kanti uma ISABC ikhuluma ngezibukeli nangabalaleli bayo isuke isho obani uma sizothi sifika kuyo isifulathele, izinwebe ngathi?
Ukhozi ake lusiphe incazelo ecace bha okwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi ngabe batshelwa ngubani ukuthi endlunkulu asinabo osomlando bakwazulu?
Batshelwa ngubani ukuthi asinabo osolwazi nabacwaningi bamasiko namagugu abenguni njalonjalo? Kungani ngaso sonke isikhathi behlala besilandela abantu bakweminye imizi abayizitha zendlunkulu bezojivaza, baphoxe indlunkulu na?
Ukhozi ake lusicacisele ukuthi lubahlonza kanjani abantu olubabizela emoyeni noma lulanda obhululu bazofunza isizwe inkowankowane. Sisanda kuzwa utshathugodo esephenduke usomlando ethi ingonyama ucetshwayo izalwa yingonyama ushaka, waze wathi kwakuyimfihlo enkulu lokho.
Otshatha bangabasakazi noma bangosomlando manje? Uma ngabe-ke lolu daba lwaluyimfihlo, yena-ke unikwe ngubani igunya lokumpongoloza amanga amangaka nathunaza najivaza aphinde ethuke ingonyama umpande kaSenzagakhona nah?
Anocela indlunkulu uma nifisa ukwazi ngozulu - sikhona siyazazi izinto zesizulu njengendlu engamakhosana esizwe sikazulu. Nathi anoke nisilalele, niyeke ukusebenzisa imisakazo nomabonwakude njengezinto zenu zasemakini.
I-SABC ayihlukane nokusibelesela ngepolitiki futhi nakhona yeqembu elilodwa - mayibe neqiniso. Mayibe (SABC) ngeyesizwe. Makungabi ngeyenhlangano ethile kuze kubone ngisho ingane encane ekhasela eziko ukuthi ubuholi bomdabu abunandawo lapha kodwa kugcinwa icala nje.
Ake niphinde niqaphele ukuthi izinhlelo ezethulwa emoyeni azi- bulali, zidukise isizwe.
Ilihlazo le nto YESABC yokukhukhumala wena owabona inhlama ibekwe elangeni kuzophekwa ujeqe. Kuningi eningakwazi kodwa nifunza isizwe ushevu ngokunika abantu okungekhona ngomlando wamazulu - nizenza ongqeqe nibe nidukisa isizwe.
Angisiyena umkhulumeli wendlu yakwethu Onkweni okuyindlu yomtwana ushingana kampande kasenzangakhona kajama. Futhi angisiyena umkhulumeli wendlunkulu kazulu isiyonke jikelele.
Kodwa ngibhoboka njegesakhamuzi saseningizimu Afrika esibuka ubukhosi bubulawa buqedwa, futhi kudicilelwa phansi amasiko nezinkambiso zabenguni.
Kuqala sasikhala sithi izwe libulawa ngamabhunu kodwa namuhla libulawa ngosibanibani ngoba bekhethana bodwa ezikhundleni.
HTH Mtwan’lindokuhle G Zulu